यस्ता भाँडामा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागि हुन्छ लाभदायक - यादका टुक्रा
8 hours ago 27 Views
खानेकुरामा विभिन्न पोषक तत्व हुन्छन् । तर खानेकुरा पकाउने र खाने क्रममा ती सबै पोषक तत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं । खानेकुरा पकाउने क्रममा कतिपय पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? हामीले प्रयोग गर्ने कति भाँडा त यस्तो हुन्छ जसले पोषक तत्व नष्ट गर्ने मात्र होइन हानिकारक रसायन समेत पैदा गर्छ । त्यस्ता भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा हामीलाई अनेक रोग लाग्ने गर्छ । हामीकहाँ धेरैथरी भाँडा प्रचलनमा छन् । जस्तो तामाको, स्टिलको, प्लास्टिकको, माटोको, कांसको, फलामको । यसमध्ये कस्तो भाँडामा खाना पकाउँदा र खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ? कस्तो भाँडावर्तनले हानि गर्छ ?
तामाको भाँडा : केही अध्ययनमा के पाइएको छ भने खानामा पाइने अर्गानिक एसिड तामाको भाँडासँग प्रतिक्रिया हुँदा धेरै तामा पैदा गर्न सक्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ । यसले फुड प्वाइजनिङ गराउन सक्छ। यद्यपि तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउँदा विभिन्न रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । राति तामाको भाँडामा राखिएको पानी बिहान खाली पेटमा पिउँदा रक्त शुद्ध गराउँछ । स्मरण शक्ति बढाउँछ । कलेजोसम्बन्धी समस्या हट्छ । त्यसो त पानी मात्र होइन, यस्तो भाँडामा भोजन गर्नु पनि लाभदायक मानिन्छ । तामाको भाँडाले खानेकुराको पौष्टिक गुण नष्ट हुन दिँदैन । तर तामाको भाँडामा दूध पिउन भने हुँदैन ।
स्टेनलेस स्टिल : स्टेनलेस स्टिल यस्तो धातु हो, जो अत्याधिक प्रयोगमा आउँछ । अधिकांशको भान्सामा हुन्छ । स्टिलको भाँडा राम्रो, सुरक्षित र सस्तो विकल्प हो । यसलाई सफा गर्न पनि निकै सजिलो हुन्छ । यद्यपि यसलाई खरिद गर्दा एउटा कुरा भने ध्यानमा राख्नुपर्छ, यस्तो भाँडा छनौट गरौं जसको मुनि कपरको लेयर लगाइएको छ । स्टिलको भाँडा हानिकारक हुँदैन । किनभने यसले न तापसँग क्रिया गर्छ न चिसोसँग । त्यसैले कुनैपनि अवस्थामा यसले हानि पुर्‍याउँदैन । तर यो पनि सत्य हो कि स्टिलको भाँडामा खाना पकाउँदा, राख्दा अतिरिक्त फाइदा पनि हुँदैन ।
ननस्टिक भाँडा : ननस्टिक भाँडाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के भने यसमा तेलको प्रयोग अत्यान्तै कम गरे पुग्छ । यसमा खानेकुरा डढ्ने वा टाँसिने समस्या हुँदैन । त्यसैले अहिले धेरैको घरमा ननस्टिक भाँडा राख्ने गर्छन् । यद्यपि तपाईंलाई थाहा छ यस्तो भाँडावर्तनले स्वास्थ्यमा केही प्रकारका समस्या ल्याउन सक्छ। ननस्टिक भाँडावर्तन धेरै तातो गर्दा यसको सतहमा निस्कने रसायन निकै हानिकारक हुन्छ ।
एल्मुनियम : एल्मुनियमको भाँडावर्तनको प्रयोग लगभग सबैजसो घरमा हुन्छ । एल्मुनियमको प्रेसर कुकुर सबैको घरमा पाइन्छ । तर, एल्मुनियमको प्रेशर कुकरमा खाना पकाउँदा ८७ प्रतिशत पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।एल्मुनियमको भाँडावर्तनमा खाना सेवन गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । यसले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या निम्त्यान सक्छ ।
फलाम : गह्रौं र महँगो हुन्छ फलामको भाँडा । यद्यपि खाना पकाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ फलामको भाँडामा। शोधकर्ताका अनुसार फलामको भाँडामा खानेकुरा बनाउँदा उक्त खानेकुरामा फलाम तत्व पनि प्राप्त हुन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ । फलामको भाँडामा फोलिक एसिड पाइन्छ, जसले रगतको मात्रा बढाउँछ । यसका साथै फलामले केही प्रकारको रोग पनि निर्मूल गर्छ । यसले शरीर सुन्निने र पहेँलोपन आउन दिँदैन । यद्यपि फलामको भाँडामा खाना पकाउनु मात्र उपयुक्त हुन्छ, खानका लागि भने होइन ।
प्लास्टिक : प्लास्टिकको भाँडा सहजै पाइन्छ । सस्तो हुन्छ । हेर्दा आकर्षक पनि । तर प्लास्टिकको भाँडामा खानेकुरा खान उपयुक्त हुँदैन।
Don't Miss it अध्ययन भन्छ – पुरुषले परस्त्रीलाई हेर्न मात्र जीवनको झण्डै ६ महिना खर्चन्छन्
Up Next टुसाएको गेडागुडी फाइदाकारी छ तर खानु अगाडी यति होस नगरे हानी गर्छ
यो बर्षामा बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ, यी कुरा याद राख्नै पर्छ
झरीमा वेपर्वाह भिज्न पाउँदा बच्चाहरु खुसीले रमाउँछन् । उनीहरु पानीमा उन्मुक्त खेल्न चाहन्छन् । यो गर्मीमा मौसममा वेपर्वाह पानीमा भिज्नुको…
यी ४ कुराहरु सम्बन्ध टिकाउन साह्रै महत्वपुर्ण छन्, जुन कुनै विश्वविद्यालयले सिकाउदैन